namany sary ho an'ny lehibe sy ny Fiarahana
namany sary ho an’ny lehibe sy ny Fiarahana
«Fifandraisana matotra»no tena fialàna bàla eo ambany izay ny lohahevitra momba ny Fiarahana matetika hevitry ny hoe miara-miaina, ny fianakaviana, sivily na»ara-dalàna»ny fanambadiana. Nahoana ny olona tia ny nataony na dia sarotra ny an-tsaina. Na izany aza, ny fifandraisana araka izany, ny namana, ary indraindray na dia ny fitiavana (tsy lazaina intsony ny dikany zavatra toy ny firaisana ara-nofo) ny sokajy ny lehibe izany toe-javatra izany, toy ny fitsipika, dia tsy hitondra. Avy amin’izany fomba fijery, ny tranonkala tompony ny loharanon-karena ho an’ny serasera amin’ny aterineto, dia tsy mikendry ny mpikatsaka ny»lehibe ny Fiarahana»(na dia ny hiresaka izy ireo dia handeha hilalao vitsivitsy tena fampakaram-bady). Mba hameno ny banga, dia manolotra ny sain’ny rehetra liana ato amin’ity fizarana vaovao ao amin ny tranonkala. Ho hitanao ato ny famerenana an-tserasera Mampiaraka toerana ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana reviews, tolo-kevitra, vokatry ny fampiharana ny fanandramana momba ny fahaiza-manokana ny harena, ary koa ny maro ny fitaovana hafa momba ny lohahevitra.
Foto-kevitra liana amin’ny Fiarahana an-tapitrisany ny olona, toy izany koa ny Internet dia midika ara-bakiteny Feno amin’ny toerana manan-danja. Be dia be ny safidy, avy amin’ny toerana mafy ny tantara sy ny lazany, mialoha ny toerana dia ephemeral, nanao miaraka amin’ny tanjona ny sorisory sy ny hanala ny vola avy adaladala mpitsidika. Tellingly, saika ny rehetra ny Mampiaraka toerana ny tenany, ankoatra ny zavatra hafa, noho ny fitadiavana fifandraisana lehibe. Matetika indrindra, io dia tsy misy ifandraisany amin’ny zava-misy, na dia tsy mifanohitra amin izany. Ny foto-kevitra dia ny hoe: aoka ny mpitsidika mifandray, dia mianatra, ary raha ny farany no mitranga zavatra lehibe, tsy misy zavatra. Ny zava-dehibe indrindra izay olona tonga any an-toerana ary tsindrina eo amin’ny dokam-barotra. Asa manokana natao indrindra ny tao amin’ny fisafidianana ny fiainana mpiara-miasa, dia nanolotra vitsivitsy ihany ny toerana. Hamantatra ny kendrena toerana avy amin’ny lamesa ny hafa,»tsy fototra», dia ny fanalahidin’ny fahombiazana eo amin’ny fametrahana ny»lehibe»ny fiainana drafitra.
Izany no ilaina mba hitondra ho fiheverana.
Ny fisian’ny manokana miasa (fitiliana ny fandaharana, ny fomba fandalinana ny fiaraha-mientana ifampizarana mifanentana), mikendry ny fitadiavana mpiara-miasa mety ho an’ny fanambadiana. Raha toa ka ny toerana dia manome ny mpitsidika na inona na inona mihoatra noho ny mba hameno ny endrika, tsy maintsy manaiky amin’ny finoana ny rehetra fa ny olona sasany dia nanapa-kevitra ny hilaza ny momba ny tenany.
Nataony malemy fanahy, dia tsy mitombina
Ankoatra izany, Ianao dia tsy handentika any an-dranomasina ireo fanontaniana.
Ny haavon’ny fomba. Raha, hoe: ny Mampiaraka toerana mampirisika ny tenany amin’ny FAHITALAVITRA (e.g. online Dating), dia midika izany fa io tetikasa io dia vola vola lehibe fa izy dia hanangona ny manan-danja mpihaino ary ny kalitaon’ny tolotra dia ho voalaza, raha tsy izany ny kofehy mifamatotra azy fotsiny aza»hanakivy». Raha toa ka ny toerana dia tsy dia mideza, ianao dia afaka mahita ny tantara ao amin’ny Web Archive.
Tantara lava porofo fa ny toerana dia tsy ephemeral
Ny fisian’ny fanamarihana momba ny tranonkala ao amin’ny Internet (tsy voatery ho hentitra tsara, ianao dia tsy afaka miangavy ny rehetra) afaka ihany koa ho naka an-kaonty.
Rehefa misoratra anarana ho»lehibe»toerana mety mitaky ny finday maro ny fandroahana ny fidirana amin’ny fehezan-dalàna amin’ny alalan’ny SMS (matetika izany no mitranga raha toa ka ny adequacy ny tahirin-kevitra dia niteraka ahiahy teo anivon ny asa fanompoana mpiasa). Izany dia tsy ho natahotra ny, raha toa Ianao ka azo antoka fa ny asa fanompoana no azo antoka, mifanaraka ny roa voalohany dia manondro. Toy izany ireo fepetra milaza fa ny Mampiaraka toerana dia lehibe momba ny raharaham-barotra, ny fampiharana-kery ny toerana misy ny fifandraisana manokana dia tsy voamariky ny asa ny tsy mpampijaly kely sy ny aterineto fraudsters
← Ny amin'ny Chat Roulette Manerana izao Tontolo izao ity Bilaogy Ity Fitsipika
Afaka hiresaka online →